Dị Ahịa Ahịa 2014 | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 10, 2014 Fraịde, Jenụwarị 10, 2014 Douglas Karr
Anyị na-ekere òkè ụfọdụ nnukwu infographics na Usoro ahia 2014 na nke a sitere na Uberflip adịghị iche - na-enye ụfọdụ nghọta maka otu ọdịnaya si bụrụ isi maka ahịa ịntanetị nke otu ika. Ọbụna n'ime ụlọ ọrụ nke aka anyị, anyị agbanweela akụ maka azụmaahịa ọdịnaya maka ndị ahịa anyị niile… otu n'ime ndị otu anyị kacha mkpa bụ Jenn Lisak onye na - ewepụta azịza ọdịnaya maka ndị ahịa anyị.
Uberflip N'oge na-adịbeghị anya lere anya na ụdị ahịa ahịa kachasị nke 2013 ma ugbu a, ha na-elepụ anya n'ọdịnihu! Kemgbe ọtụtụ afọ, ahịa ọdịnaya agala mma-inwe na ga-nwere n'usoro nke ụdị 'ahịa azum. Ya mere, gịnị ka 2014 jidere maka ohere a na-agbanwe ngwa ngwa?
Mmehie asaa na-ere ahịa nke SMS Marketing